Ihe 5 efu na 'obere ọnụ' ihe ị ga-ahụ na Córdoba | Akụkọ Njem
5 n'efu na 'ọnụ ala' ihe ị ga-ahụ na Córdoba
Carmen Guillen | | Spain obodo, Córdoba
Ọ bụrụ n’izuụka gara aga ka anyị wetara gị edemede nke enyere Ihe 7 n'efu ka ị hụ na SevilleTaa, anyị na-ewetara gị ihe yiri ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu na obodo dị n'akụkụ isi obodo Andalusia: Córdoba. Ebe i nwere ike ịhụ 5 n'efu na 'ọnụ ala' ihe ị ga-ahụ na Córdoba. Kpamkpam free bụ 3 na abụọ, na nnọọ ala na-eri ('ọnụ ala'). Ọ bara uru ileta ha ọ bụghị naanị maka ịma mma nke ebe ahụ kamakwa maka akụkọ ihe mere eme gbara ha gburugburu. O doro anya na ị na-eche saịtị ise m na-ekwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, nọgide na-agụ.
1 Cordoba nke ndị m hụrụ n'anya
1.2 Agolọ Nzukọ nke Córdoba
1.3 Alcazar nke ndị eze
1.4 Úlọ Múdejar nke San Bartolomé
1.5 Katidral ya: Alakụba
Cordoba nke ndị m hụrụ n'anya
Córdoba, mara mma na sultana, nwere ọtụtụ ihe iji gosi onye ọbịa ma ọ bụghị naanị ka m na-ekwu ya, mana ya afọ nke akụkọ ihe mere eme. Ọzọ, anyị ga-egosi ebe 3 dị na obodo a mara mma nke Andalus nke ị nwere ike ịhụ n'efu na nke 2 ị nwere ike ịga na-akwụ obere ụgwọ, nke anyị na-atụle taa 'ọnụ ala'.
N’asụsụ Arabik "Obodo na-enwu enwu", nke a ihe dị ka kilomita 8 ná mpụga Córdoba. Abd-al Rahman III nyere ya iwu ka o wuo ya, dị ka ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme si dị ka owuwu nke na-egosipụta ike nke caliph n'oge ahụ. Ndị ọzọ na-ekwu na e wuru ya iji sọpụrụ Azahara, nwanyị kacha amasị Caliph.
Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala nke Obodo Europe Nwere ike ịga leta Medina Azahara n'efu n'okpuru ihe ndị a oge usoro:
Tuesday ruo Saturday: 10: 00 n'ụtụtụ ruo 18: 30 na mgbede.
Bọchị Sọnde 10:00 ụtụtụ ruo 14:00 ehihie.
Agolọ Nzukọ nke Córdoba
Templelọ nsọ a bụ wuru na 1315 nke onye na-ewu ụlọ bụ Isaq Moheb dere. Ọ bụ naanị ụlọ nzukọ dị na Andalusia. Na ọnụ ụzọ gị bụ n'efu maka ụmụ amaala nke European Union, dị ka na Medinza Azahara. Oge nleta ndị a bụ:
Tuzdee rue Sọnde: Site n'elekere 09:30 nke ụtụtụ ruo elekere 14:00 nke ehihie nakwa site na 15:30 nke ehihie ruo 17:30 elekere
Alcazar nke ndị eze
Alcázar de los Reyes dị na Ebe a na-eli ozu nke ndị nwụrụ n’ihi okwukwe ha. Ọ bụ obí eze na-achịkọta ụdị ihe ịchọ mma niile n'ihi nnukwu mgbanwe nke ije na mpaghara ahụ. A gwakọtara Arabesque na metụtara Visigothic na nke ndị Rom nke gafere n’obodo ahụ. Ọ bụ nnukwu ebe e wusiri ike, nke nwere ụlọ elu anọ siri ike ahaziri nke ọma ma jiri ogige ndị echekwara nke ọma chọọ ya mma nke ọma.
Su Oge eleta es:
Monday emechi ka nleta.
Tuesday ruo Saturday, site na 08:30 ụtụtụ ruo 19:30 elekere.
Sọnde, site na 09:30 nke ụtụtụ ruo 14:30 elekere.
Ọnụ ụzọ bụ n'efu maka ụmụaka ruo afọ 14 ọ bụkwa naanị ndị okenye na-akwụ ụgwọ 4 euro kwa tiketi.
Úlọ Múdejar nke San Bartolomé
Ugbu a, Mudejar banye n'plọ Ekpere nke San Bartolomé dị na Ngalaba Nkà Ihe Ọmụma na Akwụkwọ Ozi nke Mahadum Córdoba. E kwuputara ya na akụ nke ọdịbendị ọdịbendị na June 3, 1931 ma ọ bụghị ruo mgbe March 20, 2010 mgbe ọ meghere ọnụ ụzọ ya n'ihu ọha, mgbe mweghachi ahụ rụrụ n'etiti 2006 na 2008.
Mọnde bido n’elekere atọ nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede.
Tuesday ruo Saturday site na 10:30 nke ụtụtụ ruo 13:30 elekere na site 15:30 pm to 18:30 pm
Sọnde site na 10:30 nke ụtụtụ ruo 13:30 elekere.
Ọnụ ụzọ gị bụ n'efu.
Katidral ya: Alakụba
Ma dika isi ikpeazu, ebe kachasi nma na Córdoba.
Buildinglọ a bụ nke kachasị mkpa na ọdịda anyanwụ Alakụba ụwa, ebe mara mma ma dịkwa ebube. Onye ọ bụla banyere n’ụlọ alakụba na-anọ chọọ ya ịchọ mma, ma na Renaissance, Gothic na Baroque nke ụdị ụlọ Ndị Kraịst. Ruo ọtụtụ afọ, La Mezquita nabatara ndị na-efe chi na ọbụna ndị Alakụba na Ndị Kraịst kesara ya tupu oge Abderraman I (ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche taa, ma ọ bụ na ọ bụghị?).
N'ime ụlọ gị ị nwere ike ịhụ nke ọma abụọ dị iche iche ebe:
Ogige ahụ, ebe minaret ahụ dị, onyinye nke Abd al-Rahman III.
Ime ụlọ ekpere.
Kemgbe ọtụtụ afọ, e wuru mpaghara ise ọzọ kwekọrọ na ụfọdụ ndọtị.
Na ụlọ alakụba, onye ọ bụla chọrọ ịbanye ga-akwụ 8 euro dị ka ego mbata (mana ọ bara ezigbo uru). Ya oge usoro bụ ndị a:
Site na Mọnde ruo Satọde, ndị njem nleta si elekere 10 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke ụtụtụ. (€ 00).
Site 8:30 na 10:00 awa i nwere ike ime ka a nleta ofufe na-adịghị duu, nke ga-abụ free.
N’ụbọchị Sọnde, ọ na-emechikwa nleta n’ihi na a na-eme ememe okpukpe.
N'ezie, ha bụkwa ihe a ga-ahụ maka ọnwa nke Mee, ndị ama ama Patios de Córdoba na ngosi ya, nke anyị ga-arara otu isiokwu pụrụ iche ka ụbọchị na-eru nso (dị ezigbo anya!). Onye ọ bụla bịara ileta Córdoba, ọ bụghị naanị na ọ hụrụ obodo ahụ n'anya kamakwa ndị bi na ya na ìhè ya. Ọ bụghị nnukwu obodo ma nwee a nnukwu ọdịbendị ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme iji kọọ.
Ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eleta na oge opupu ihe ubi a, Córdoba kwesịrị ịbụ otu n'ime nhọrọ iri mbụ ị nwere ike ịhọrọ. Will gaghị akwa ụta!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Córdoba » 5 n'efu na 'ọnụ ala' ihe ị ga-ahụ na Córdoba
Isi ihe ise kpatara ịmara Teruel